အိမ်မှာ Dora ဂေါက်သီး
မာရီယိုဒုက္ခ၌ရှိ၏။ မီး၌ဆင်းကျသွားရာမှမာရီယိုကို Save လိုက်ပါ။ တက်နှင့်အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ရန်သူများကိုဆင်းရိုက်မှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီ RPG စတိုင်ပြိုင်ကားသမား၌သင်တို့၏ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် ATV အပေါ် Hop!
ရှေးဟောငျးအီဂအင်အားကြီးတဲ့လူပျိုမျက်နှာပြင်3အစားထိုးနောက်ဆုံးတွင်နှင့်အတူ RPG-Metroid လိုပဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဂိမ်း၏ 35 မိ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အိန္ဒိယနှင့်ပြင်သစ်ဖျက်ဆီးဖို့ငှားကိုကြေးစားယူပြီးနေကြသည်။ သူတို့ကိုဆန့်ကျင် Fight တိတ်တဆိတ်တစ်ဦးဓါးလက်နက်။ ရွှေ့ဖို့မြှားခလုတ်များကိုသုံးပါနဲ့ space bar ကိုတိုကျခိုကျဖို့။
ဂိမ်းကစားခြင်းကိုအခြေခံပြီးအခန်းကဏ္ဍပါ။ မိကျောင်း 70 အမျိုးမျိုးကျော်စစ်တိုက်သစ်စက်ကိရိယာများကိုစုဆောင်းနှင့်အသစ်စာလုံးပေါင်းသင်ယူကြသည်။
သင့်ရဲ့လက်နက်တွေသူတို့နှင့်အတူ blasting, နှင့်တံခါးဝမှရတဲ့အထဲကသူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့ထောင်ချောက်နှင့်ကာကွယ်ရေးတက် setting များကဖုတ်ကောင်များ၏ကျူးကျော်ခြင်းမှသန့်ရှင်းသောအဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုခုခံကာကွယ်!
ဧရာ mayhem 2
သင့်ရဲ့လက်နက်တွေလက်နက်နှင့်အတူဘေးဥပဒ်မျိုးနွယ်စုများသတ်ပေါက်ကွဲ combo ဖန်တီးနှင့်သင့် kamikaze ဗုံးနှင့်အတူသူတို့ကိုအပြီးသတ်! , အချက်များကိုစုဆောင်းအောင်မြင်မှုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးဖန်တီး! ရွေးချယ်မှုများကိုရွေးဖို့မောက်စ်။ , ရွှေ့ခုန်နှင့်ရည်ရွယ်ထားမှခလုတ်များကို arrow ။ သင့်ရဲ့ weapo ဖွင့်ဖို့ spacebar
သငျသညျအသီးအသီးသည့်အဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာလက်ဆောင်ကယ်နှုတ်အဖြစ်ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ထရပ်ကားမောင်း။ nice ဂရပ်ဖစ် & ရူပဗေဒ
သငျသညျဒင်္ဂါးပြားဖမ်းပြီးအတိုင်း, သင်တို့၏ moped စီးအသွားအလာရှောင်လျက်, လမ်းဘေးအပေါ်လူတွေလက်ဆောင်ဆမ်း။
ဧလိတိုက်ခိုက်3- ဒီရှင်သန်မှုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဆီးနှင်း, တောတွင်း, ချောက်မြေများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်မှတဆင့်တိုးဖို့အားလုံးကိုရန်သူယူနစ်ကိုဖကျြဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ 30 ကျော်လက်နက် featuring ။ ရွှေ့ရန်သင့်ကစားသမား, လက်ဝဲနှင့်ညာဘက်ခလုတ်များကိုရွှေ့ဖို့လှုပ်ရှားမှု keys ကိုသုံးပါ။ စာနယ်ဇင်းများ
သင် hack စစ်တပ်ကတစ်ခုအထက်တန်းလွှာအဏ္ဏဝါဖြစ်? သင့်ရဲ့ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်ဖမ်းပြီးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး excercise ယူပါ။ youve တယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ပေးနိုင်ပါတယ်!
ထူးခြားသောတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အတူ Epic စစ်ပွဲ4features တွေကို5ထူးခြားသောသူရဲကောင်းများ။ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုများ3ကွဲပြားခြားနားသော Modes သာ (ပုံမှန်, ခက်, မော်ကွန်း) နဲ့ 12 အဆင့်ဆင့်နှင့်4အပိုအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်စစ်တိုက်။
မြေကြီးရှင်သန်မှုအတွက်ဒီအနာဂတ်ရန်ပွဲအတွက်တပါး, စက်ရုပ်များနှင့်ဖုတ်ကောင်စစ်တိုက်ခြင်း။ ဒါမှမဟုတ်ရန်သူများကိုဖြစ်က၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့စစ်တိုက်ခြင်း။